Sun, May 31, 2020 at 3:05am
संविधान संशोधनमा सरकारलाई सहयाेग गर्ने कांग्रेसको निर्णय #आहा खबर# परीक्षण र उपचार समयमै नपाउँदा क्वारेन्टाइनमै युवकको मृत्यु #आहा खबर# क्वारेन्टाइनमा राखिएका एक बालकको मृत्यु #आहा खबर# कोरोनाका कारण विश्वभर १ सय २८ नेपालीको मृत्यु #आहा खबर# आजकाे माैसम: पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभावले बिभिन्न स्थानमा वर्षा #आहा खबर# कोरोनाभाइरसकाे भ्याक्सिन यहि वर्षको अन्त्यसम्म बजारमा आउने चीनकाे दाबी #आहा खबर# हत्या आरोपमा सुनसरीका २ जना पक्राउ #आहा खबर# नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या सात पुग्यो #आहा खबर# नेपालमा शनिबार मात्र १८९ जना कोरोना संक्रमित थपिए #आहा खबर# संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म एमसीसीअन्तर्गतका काम रोक्ने नेकपामा सहमति #आहा खबर# दैलेखमा क्वारेन्टिनमा बसेका ३५ वर्षीय पुरुषकाे मृत्यु #आहा खबर# काेराेना महामारीबीच पाकिस्तानले शुरु गर्‍याे अन्तर्राष्ट्रिय उडान #आहा खबर# संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक जारी #आहा खबर# सचिवालय बैठकको निश्कर्ष: संसदकाे फैसला अनुसार एमसीसी अघि बढ्छ #आहा खबर# कोरोना महामारीले अमेरिकामा रोजगार संकट, ४ करोडले मागे बेरोजगार भत्ता #आहा खबर#
काठमाडौं, ७ वैशाख । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट शनिबार साँझसम्म मृत्यु हुने गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) २८ पुगेका छन् । एनआरएनका अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा गठित कोभिड –१९ उच्चस्तरीय समिति, स्वास्थ्य उपसमितिले संकलन गरेको तथ्यांकानुसार बेलायतमा १७, अमेरिकामा आठ, संयुक्त अरब इमिरेट्समा दुई र आयरल्याण्डमा एक जनाको निधन भएको हो । स्वास्थ्य उपसमितिका संयोजक डा सञ्जीव सापकोटाका अनुसार नेपालबाहेक विश्वभर..
नयाँदिल्ली, ३० चैत। भारतले कोरोना भाइरसका कारण देशव्यापी रुपमा गरिएको लकडाउन अवधि थप दुई साता बढाउने संकेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार मुख्यमन्त्रीहरुसँग गरेको भिडियो वार्तामा अधिकांश राज्यका मुख्यमन्त्रीले संक्रमणबाट जोगिन अप्रिलभर लकडाउन गर्न सुझाव दिएका थिए। भिडियो वार्तापछि सरकारका मुख्य प्रवक्त केएस धतवलियाले ट्विट गरेका छन्, 'प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुबीच भएको भिडियो वार्तामा अधिकांश राज्यका मुख्यमन्त्रीले लकडाउन दुई साता थप गर्न..
नयाँ दिल्ली, ३० चैत। भारतमा कोरोना भाइरसका कारण एक चिकित्सकको मृत्यु भएको छ । उत्तर प्रदेशको बुलन्दसहरबाट उपचारका लागि दिल्ली गएका डाक्टरको दिल्लीस्थित सफदरजंग अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि ती ७ अप्रिलमा उपचारका लागि पत्नी र छोरालाई दिएर दिल्ली गएका थिए । चिकित्सकको सल्लाहअनुसार नै अस्पताल भर्ना भएका उनको स्वाब परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पाइएको थियो..
नयाँ दिल्ली, २७ चैत । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालै लकडाउन नहट्ने बताएका छन् । बुधबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूसँग कुराकानी अप्रिल १४ पछि पनि लकडाउन बढ्ने उनले बताए । कोरोनाको प्रभाव विस्तार हुँदै गएपछि अहिले भारतमा २१ दिन लामो लकडाउनको घोषणा गरिएको छ । भारतमा आज लकडाउनको १६ औँ दिन हो । उनले राष्ट्रिय आपतकालिन समय जस्तै हुने पनि..
एजेन्सी, १५ फागुन भारतको उत्तर–पूर्वी दिल्लीमा भड्किएको हिंसामा ज्यान गुमाउनेको संख्या ३५ पुगेको छ। विभिन्न अस्पतालहरुमा दुई सयभन्दा बढीको उपचार भइरहेको बताइएकाे छ। जसमध्य केही व्यक्तिहरु गम्भीर रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। बुधबार राति हिंसाका ठूला घटना नभएपनि केहीस्थानमा भाजपा समर्थकहरुले मुस्लिम समुदायका मानिसहरुलाई निसाना बनाएका छन्। मुस्लिम समुदायका घरमा आगजनीसमेत भएको छ। सरकार समर्थकहरुले रिपोर्टिङमा रहेका पत्रकारहरुलाई समेत धर्मको बारेका सोधेर धम्क्याएकाे समाचारहरु..
काठमाडौं, फागुन १४ भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको उत्तर–पूर्वी क्षेत्रमा तेस्रो रात पनि हिंसात्मक समूहहरुले मुस्लिमहरूको घर र पसलहरूमा आक्रमण गरेका छन् । दिल्लीमा दशकौंपछि देखिएको घातक हिंसाको घटनामा हालसम्म २१ जनाको मृत्यु भएको छ । मारिनेहरूमा हिन्दु र मुस्लिम दुवै समुदायका मानिसहरू छन् । १८९ जना घाइतेको दिल्लीस्थित गुरु तेगबहादुर अस्पतालका उपचार भइरहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । घाइतेमध्ये केहीलाई गोली लागेको र केहीको शरीरमा चक्कुको घाउ..
काठमाडौं, २६ माघ ७० सदस्यीय दिल्ली विधानसभा चुनावमा ६७२ उम्मेदवारले भाग लिएका छन् । शनिबार भएको मतदानमा ५९ प्रतिशतले मताधिकार प्रयोग गरे । एक करोड ४८ लाख मतदाताका लागि १३ हजार ७५० मतदान केन्द्र तोकिएको थियो । दिल्लीमा यसपटक कसले बाजी मार्ला त ? सही जवाफ थाहा पाउन मंगलबार हुने मतगणनाको परिणाम कुर्नुको विकल्प छैन । तर निर्वाचनपछि गरिएका विभिन्न मत सर्वेक्षण (एक्जिट..
नयाँ दिल्ली, १ माघ १६ डिसेम्बर २०१२ मा निर्भयाको सामूहिक बलात्कारपछि विभत्स हत्या भएको थियो । सात वर्षपछि दोषीहरुलाई मृत्युदण्डको प्रक्रिया थालिएको छ । सामूहिक बलात्कार र हत्याका चार दोषीलाई २२ जनवरीमा फाँसी दिने तयारी भइरहेको छ । दिल्लीको तिहाड जेल नम्बर ३ मा फाँसी दिइनेछ । भारतका विभिन्न स्थानमा यस्ता जेल छन्, जहाँ फाँसीको व्यवस्था छ । दिल्लीस्थित नेशनल ल युनिभर्सिटीका..
काठमाडौँ, १४ पुस भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दिल्लीस्थित सरकारी निवासमा आगलागी भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले सेभेन लोककल्याण मार्गस्थित निवासमा आगलागी भएको जनाएका छन्। आगो नियन्त्रण गर्न नाै वटा दमकल घटनास्थलमा पुगेको र आगो नियन्त्रणमा लिने प्रयास भैरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन्। स्थानीय समयअनुसार साँझ सात बजेर २५ मिनेटमा आगलागी शुरू भएको समाचारहरूमा जनाइएकाे छ।..
एजेन्सी, ११ पुस । नागरिकता संशोधन विधेयक र एनआरसीलाई लिएर भारतभर प्रदर्शन भरिएको छ । नागरिकता संशोधन विधेयकका विरद्ध भारतभर प्रदर्शन चर्केका बेला आज हुने जुमेको नमाजभन्दा पहिले उत्तर प्रदेशको अधिकांश क्षेत्रमा धारा १४४ लागु गरेर इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ । मेरठ, सीतापुर, कानपुर, गाजियाबाद, बिजनौर, फिरोजाबाद, अलीगढ लगायतका ठाउँमा इन्टरनेट बन्द गरिएको छ । गत हप्ता नागरिकता संशोधन विधेयक र एनआरसीलाई लिएर..
एजेन्सी, ८ पुस । अधिकांश राज्यमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले महत्वपूर्ण राज्यबाट सत्ता गुमाएको छ । झारखण्डमा लगातार ५ पटकसम्म मुख्यमन्त्री भएका रघुबर दास यो पटक भने पराजयको संघारमा पुगेका छन्। भाजपाको तर्फबाट चुनाव लडेका दासले चुनाव हुनुभन्दा अघि ‘तपाईंको उमेर ६५ वर्ष भन्दा बढी’ भन्ने नारा दिएका थिए । तर उनी अहिले हारको संघारमा उभिएका छन् । सो..
काठमाडौँ, ७ पुस भारतमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार पछिल्लो समय अलोकप्रिय हुँदै गएको देखिन्छ । भारतमा पछिल्ला दुई वर्षमा राजनीतिक समीकरणमा निकै ठूलो परिवर्तन देखिएको छ । डिसेम्बर २०१७ सम्ममा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको गठबन्धन (एनडिए)ले १९ राज्यमा शासन गर्दै आएको थियो । परिस्थिति सधैँ अनुकुल हुँदैन भनेझैं भारतीय जनता पार्टीले मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढमा सत्ता गुमायो । यस्तै आन्ध्र प्रदेशमा पनि भारतीय जनता..
नयाँ दिल्ली, ४ पुस । भारतमा ल्याइएको नागरिकता संशोधन ऐनको विरुद्धमा आन्दोलन झन् झन् चर्किँदै गइरहेको छ । यसैक्रममा बिहीबार वामपन्थी दलहरुले भारत बन्दको घोषणा गरेकोमा प्रहरीको गोली लागेर तीन जनाको मृत्यु हुनुका साथै सयौं मानिसहरु पक्राउ परेका छन् । नयाँ नागरिकता कानुनमा पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट आउने गैरमुश्लिम प्रवासीलाई भारतको नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको छ । यसका आलोचकहरुले यो कानुनले भारतको..
काठमाडौँ, २९ मङ्सिर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सिंढी चढ्दै गर्दा एक्कासी लड्न पुगेको भिडियो 'भाइरल' बनेको छ। भिडियोमा मोदी हतारहतार सिंढी चढ्दै गरेको देखिन्छ। हतारामा सिंढी चढ्दै गर्दा उनी अकस्मात लड्न पुग्छन्। लगत्तै सुरक्षाकर्मीले उनलाई उठाएका थिए। यो घटना भारतको कानुपुरस्थित अटलघाटमा भएको एक कार्यक्रममा सहभागि हुन जाँदाको हो। उनी सुरक्षाकर्मीको घेरामा रहेर सिंढी चढ्दै गर्दा अकस्मात लडेका थिए। यो भिडियो 'द..
गुवाहाटी, भारत, २९ मङ्सिर भारतमा हालै पारित भएको विवादास्पद नागरिकता सम्बन्धी कानुनको विरुद्धमा भएको आन्दोलनका क्रममा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु भएका मध्ये तीन जनाको प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । कानुन पारित भएदेखि नै भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा लगातार आन्दोलन भइरहेको छ । आन्दोलनलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा निकायहरुले कतिपक्ष क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएका छन् भने कतिपय..
लण्डन, २८ मंसिर । हालै बेलायतमा सम्पन्न त्यहाँको आम चुनावमा भारतीय मूलका १५ जना सांसद बन्नेगरी चुनाव जितेका छन् । विगत १ सय २७ वर्षको इतिहासमा भारतीय मूलका बसोबासीको यो सबैभन्दा ठूलो जीत समेत हो । जसअन्र्तगत प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको कन्जरवेटिव दलमा ७ जना तथा उनका प्रमुख विरोधी दल लेबर पार्टीमा पनि बराबर ७ जना भारतीय मूलककाले सांसदमा जीत दर्ज गरेका..
एजेन्सी, २५ मङ्सिर । संघीय अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ)ले अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रताबारे भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेको छ । भारतको तल्लो सद लोकसभाबाट नागरिकता संशोधन विधेयक पास भएपछि लाखौँ मुस्लिम र गैरहिन्दू अल्पसंख्यक नागरिकताविहीन हुने भन्दै अमेरिकाको धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘नागरिकता विधेयक गलत दिशामा अघि बढाएको एक खतरनाक कदम’ भएको टिप्पणी गर्दै यूएससीआईआरएफले सो विधेयक पारित..
एजेन्सी, २३ मङ्सिर । विश्वका सर्बश्रेष्ठ व्यक्ति देखि सामान्य जिवनयापन गर्ने मानिसले मोबाइल–फोनको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्रीले कुन मोबाइल प्रयोग गर्लान ? यो सबैलाई लाग्न सक्ला । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एप्पल र एन्ड्रोइड मोबाइल प्रयोग गर्छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहन यी मोबाइलसेट प्रयोग गर्ने गरेको बताइएको छ ।..
नयाँ दिल्ली, २२ मङ्सिर : भारतको केन्द्रीय राजधानी नयाँदिल्लीमा भएको आगलागीको घटनामा परी कम्तीमा ४३ जनाको मृत्यु भएको छ । एउटा कारखानामा आगलागी भएको र सख्त घाइतेहरुको संख्या धेरै भएकाले मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन् । सहरका साँघुरो बस्तीमा आगलागी भएपछि निर्माण सामग्री र भण्डारण गरिएका सामग्रीका कारण आगो नियन्त्रण गर्न कठिन भएर धेरैतिर फैलिएको बताइएको छ । “घटनास्थलबाट हामीले कम्तीमा..
काठमाडौँ, १९ मङ्सिर । दक्षिण एशियाको गरिबी निवारण, क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्य लिएर सन् १९८५ डिसेम्बर ८ मा स्थापना भएको ‘दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन’ (सार्क) विभिन्न आरोहअवरोह पार गरी ३५औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । सन् १९८५ डिसेम्बर ७ र ८ मा बङ्गलादेशको ढाकामा प्रथम सम्मेलन गरी शुरु सार्कको यात्रा भएको हो । सार्कको स्थापनाका समयमा भूमिका निर्वाह गर्ने तत्कालीन..
कोलम्बो, ११ मङ्सिर : श्रीलङ्काका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले बुधबार ३५ जनालाई राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ । त्यसैगरी उहाँले अरु तीन जनालाई उपमन्त्रीका रुपमा नियुक्त गर्नुभएको छ । उनीहरुलाई संसदको नयाँ निर्वाचन नहुँदासम्मका भनेर गठन गरिएको अन्तरिम मन्त्री परिषद्मा समावेश गरिएको हो । उनीहरुलाई राजधानी कोलम्बोस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सपथ गराइएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार नयाँ राज्य मन्त्रीमध्ये चमाल..
मुम्बई, ९ मंसिर । अहिले भारतको महाराष्ट्र राज्यमा राजनीतिको पारो चढेको छ । केही अघि महाराष्ट्र राज्यमा सम्पन्न विधानसभाको चुनावमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएपछि सबै भन्दा ठूलो दल तथा पूर्ववर्ती सत्ताधारी बिजेपीले अकस्मात राजनीतिको नयाँ दाउ खेल्दै सरकार बनाएपछि त्यहाँको राजनैतिक विवाद झन् चुलिएको हो । गज्जबको कुरा के भने त्यसबेला अजित पवार स्वयम् आफै मुख्यमन्त्री बन्न चाहेका थिए ।..
मुम्बई, ८ मङ्सिर राष्ट्रिवादी काङ्ग्रेसका नेता नितिन पवारले सामाजिक सञ्जालमार्फत् एक भिडियो पोस्ट गर्दै आफू सकुशल रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले आफन्त, शुभेच्छुक र परिवारलाई आफ्नो बारेमा कुनै चिन्ता नलिन उक्त भिडियोमा अनुरोध गर्नुभएको हो । उहाँको परिवारले शनिबार पार्टी बैठकका लागि भन्दै घरबाट निस्केका पवार परिवारको सम्पर्कमा नआएको भन्दै महाराष्ट्रको पञ्चावती प्रहरी स्टेसनमा छोराले खोजीका लागि निवदन दिनुभएको थियो । भिडियोमा भनिएको..
नान्गार्हार, ७ मङसिर : अफगानिस्तानको पूर्वी प्रान्त नान्गार्हारमा सुरक्षा कारबाही जारी रहेको अवस्थामा इस्लामिक स्टेट्स (आइएस) समूहका दश सदस्यले आत्मसमर्पण गरेका अफगान विशेषबलका कमाण्डरले बताउनु भएको छ । नान्गार्हार प्रान्तको आचिन जिल्लामा आतङ्कवादविरुद्ध सुरक्षाबलले जारी राखेको कारबाहीको क्रममा १० आइएस लडाकू समूहले आफू हतियारसहित अफगान विशेष सेनालाई आत्मसमर्पण गरेका छन् । अफगानसेनाद्वारा जारी विज्ञप्ति बाँकी आईएस सदस्यहरूले पनि आत्मसमर्पण गर्ने वाहेक अन्य विकल्प..
इस्लामाबाद, ६ मंसिर । कश्मीर मुद्दाललाई फेरि ब्युँताउन कोशिश गरिरहेका पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई टेलिफोन गरि त्यसको चर्चा गरेका छन् । खानले ट्रम्पसँगको टेलिफोन वार्ताका क्रममा भारत र पाकिस्तानबीचमा विवादको विषय रहको कश्मीर मुद्दालाई लिएर सो विषयमा चर्चा गरेका हुन् । त्यसका साथै खानले अफगानस्तानको शान्ति प्रक्रियाका विषयमा लिएर समेत ट्रम्पसँग फोनमा कुराकानी गरेका थिए । हालका दिनमा..
काठमाडौँ, ५ मङ्सिर श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोताभाया राजापाक्षेले आफ्नै दाजु पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । प्रधानमत्री रनिल विक्रम सिंघेले राजिनामा दिएसंगै महिन्दा राजापाक्षे प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनी सन् २००५ देखि २०१५ सम्म श्रीलंकाको राष्ट्रपति बनेका थिए । गत शनिवार सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा गोताभाय राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन् । दुई दशक भन्दा लामो समय चलेको गृहयुद्ध अन्त्यका लागि राजापाक्षे..
कोलम्बो, श्रीलङ्का, ५ मङ्सिर । श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्रीका रूपमा महिन्दा राजापाक्षले बिहीबार सपथ ग्रहण गर्नुभएको छ । परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भमा देशको नेतृत्वका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्गेले बुधबार राजीनामा दिनुभएको थियो । बुधबार नै नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोतावाय राजापाक्षले भूतपूर्व राष्ट्रपतिसमेत भइसकेका आफ्नै दाजुलाई प्रधानमन्त्रीका लागि बुधबार नै सिफारिस गर्नुभएको थियो । श्रीलङ्काको इतिहासमा दाजुभाई नै देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनेको यो..
कोलम्बो, श्रीलङ्का, ४ मङ्सिर श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोतावाय राजापाक्षले आफ्ना दाजु तथा पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा चयन गर्नुभएको छ । श्रीलङ्कामा गृहयुद्धको कारण बनेका तमिल टाइगर्स विरूद्धको लडाईमा सशक्त भूमिका खेलेका महिन्दा राजापाक्षले सन् २००५ देखि २०१५ सम्म श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो । श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्गेले बुधबार पदबाट राजिनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि महिन्दा राजापाक्षको नाम सिफारिस गर्नुभएको..
१ मङ्सिर : श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिमा विपक्षी दलका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नु भएका पूर्व रक्षामन्त्री गोटाबाया राजापाक्षे निर्वाचित हुनुभएको छ । झण्डै दश बर्ष अगाडी रक्षामन्त्री रहेका बेला तमिल टाईगर्सको द्धन्द्ध अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएका राजापाक्षे आइतबार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो । श्रीलङ्काली सेनाका पूर्व ‘लेफ्टिनेन्ट कर्णेल’ समेत रहनु भएका राजापाक्षेले झण्डै ५३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुभएको उहाँका प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन् । उहाँले..
नयाँदिल्ली, ३० कात्तिक महाराष्ट्रमा सरकार गठनको विषयलाई लिएर भाजपासँग रुष्ट बनेको शिवसेना अब संसदमा पनि विपक्षी बेन्चतर्फ बस्ने भएको छ । सोमबार सुरु हुने संसदको हिउँदे सत्रमा शिवसेनका सांसदहरु विपक्षी बेन्चमा बस्ने राज्यसभा स्रोतको हवाला दिँदै स्थानीय मिडियाले जनाएका छन् । शिवसेनाका सांसद सञ्जय राउत र अनिल देसाई विपक्षी बेन्चमा बस्ने बताइएको हो । यससँगै लोकसभाका १८ सांसद पनि विपक्षी बेन्चमा बस्ने बताइएको..
Results 348: You are at page 1 of 12